Usebuyele ekudayiseni izimpahla zokugqoka osengenise nakwiTV ngohlelo lwemishado kodwa kuloku usebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje. Uxoxe noZANELE MTHETHWA | Umbele
UNkk uPhindile Grootboom umnikazi wePhindilicious
UKUVALELEKA ngenxa yemigomo ehambisana nokunqanda iCOVID-19, kuzale elinye ibhizinisi kowesifazane osengene nasemkhakheni wethelevishini.
UNkk uPhindile Grootboom, obewumethuli wohlelo lwemishado iFor Better or Worse nomyeni wakhe uMnu uMonwabisi Grootboom, uthI ukuvaleleka kumenze ukuthi acabange kabusha ngebhizinisi.
Usungule isitolo esidayisa izimpahla zokugqoka kwi-internet iPhindilicious Boutique. Uthe ngesikhathi izwe livaliwe uzitshele ukuthi uzozama ngayo yonke indlela ukungaphumi endlini uma singekho isidingo esiphoqayo. Loku kwenze ukuthi azifundise ukuthenga konke akudingayo nge-internet. Yilapho kuvele khona umbono webhizinisi lakhe elidayisa kwi-internet.
Akamusha ebhizinisini lezimpahla zokugqoka njengoba eke waba nesitolo esidayisa izingubo zomshado eThekwini. UNkk uGrootboom, osezinze eGoli, uthi lesi sitolo wasivala eminyakeni emine edlule ngenkathi efuduka.
“Kudingeke (ukuthi) ngenze ucwaningo ngebhizinisi lokudayisa kwi-internet ngaphambi kokuvula isitolo sami. Ngithole ukuthi kuningi okuhle ngaleli bhizinisi futhi awudingi ngisho imali yokuliqala njengamanye amabhizinisi ajwayelekile. Kudingeka ngibe ne-data kuphela, ngiphinde ngibe nabathembekile abazongidayisela isitoko,” kuchaza yena.
Uthi ngenkathi enesitolo sezingubo zomshado bekwenzeka ukuthi ahlale nendathane yesitoko singathengwa, sesiphume nasesitayeleni. Loku bekwenziwa wukuthi abanye bekwenzeka bangazithandi izingubo abazifica esitolo.
“Ukudayisa kwi-internet kwenza ukuthi ngikwazi ukukhangisa izimpahla enginazo. Ikhasimende elithengayo lifaka i-oda selazi ukuthi lifunani,” kusho uNkk uGrootboom.
Uthi yize abanye abantu abamnyama besemanqika ukuthenga kwi-internet kodwa iCOVID-19 ibaphoqile, yaphinde yakhombisa ukuthi maduze kuzobe kuyindlela ejwayelekile yokuthenga.
Uthi ezinye izinselelo ezenza ukuthi abantu banqikaze ukuthenga kwi-internet, wukungathembeki kwabadayisi. Ulinganise ngokuthi kuyenzeka ikhasimende libone impahla kwi-internet kodwa kuthi uma selithengile linikwe okungafani nobekukhangisiwe.
Okunye okwenze kube lula ukuqala leli bhizinisi wukuthi akudingeki ukuthi ube nendawo yokudayisa. Ngesikhathi enesitolo kwakudingeka akhokhe irenti futhi abe nendawo enkulu yokubeka impahla. Uthe kuleli bhizinisi elisha akudingeki ngisho ukuthi aqashe abazomsiza futhi akukho nezikweletu ezidalekile.
Okwamanje udayisa izicathulo, izikhwama, amabhande nezingubo zabesifazane. Ubona amathuba okukhula uma kwanda amakhasimende, agcine edayisa nangaphandle kwezwe.
EPhindilicious Boutique kudayisa nezikhwama
“Okuzokwenza ukuthi ibhizinisi lami lithembeke wukuthi ngiqala ngizithengele mina kuqala noma iyiphi impahla engizoyidayisa. Ngenzela ukuqinisekisa ukuthi ngidayisa inguganaboya. Nami ngeke ngithande ukudayisela abantu impahla engingeke ngiyisebenzise,” kusho yena.
Yize okwamanje esazidayisela esitolo sakhe, uthi ngeke alinqabe ithuba uma ecelwa ngabanye ukuthi abadayisele kwi-internet.
UNkk uGrootboom uthi akufunde ngeCOVID-19 wukuthi kumele ube namanye amasu uma ibhizinisi nomsebenzi okuwona ungasindanga ngenxa yokuvalwa kwezwe. Uthi naye ubenezinhlelo ezinkulu emkhakheni wezokungcebeleka ngonyaka odlule kodwa zabhuntsha zonke.
Facebook: Phindile Zungu Grootboom